Nooca caaryada-saareyaasha iyo shirkado - Shiinaha Factory caaryada nooc
Saxe sare caaryada sameeyey
Yuanfang waa lammaanahaaga hal-joogsi ee loogu talagalay caaryada noocyada dhaqsaha badan leh & adeegyada wax isku duro ee duritaanka
Shirkadaha Samaynta Mashiinka Mashiinka ah ee Shiinaha
Shirkado badan ayaa bixiya caaryado nooc ah ka hor inta aysan si toos ah ugu aadin habka wax soo saarka sababo kala duwan awgood.
Kuwani waa wasakhooyin qiime jaban oo inta badan ka duwan caaryada wax soo saarka maxaa yeelay waxaa loogu talagalay in lagu isticmaalo muddo gaaban oo keliya.
Waa maxay Qaab nooc ah?
Qaabab nooc ah ayaa badanaa ka duwan caaryada wax soo saarka maxaa yeelay badanaa looma jeedin adeegsiga muddada dheer. Maaddaama mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha warshadaha, Yuanfang Teknolojiyaddu waxay leedahay khubaro la tacaali kara nooc kasta oo caaryo ah (oo ay ku jiraan noocyada hore), waxay siiyaan caaryado tayo sare leh qiime aad u tartan badan.
Waa maxay sababta Qaab dhismeedka?
Sidaan soo sheegnay, wasakhahaasi nooc waxay u adeegaan shaqo ka duwan tan ugu dambeysa, oo ay ku jiraan ujeedooyinka soo socda:
1. Qaab dhismeed hore oo aan qaali ahayn oo ka caawiya tijaabinta caaryada ka hor soosaarka ugu dambeeya.
2. Waqtiyada hogaaminta ee gaagaaban si loo helo nooc la tijaabin karo, caadi ahaan waxay qaadataa 2-4 toddobaad.
Caaryada noocyada ah looma jeedin inay yihiin noocyadii ugu dambeeyay, taasna macnaheedu waa qaab weji loo dhisayo.
Qaabka nooca ahi ma aha nooca ugu dambeeya, laakiin waa qaab loo dhiso qaab-dhismeedka marxaladaha. Si ka duwan caaryada cirbadda ee ugu dambeysa, qaabka caarada ah waxaa laga sameeyaa waxyaabo ka raqiisan, sida birta aan adkeyn, aluminium ama P20. Maaddaama ayan u xoog badnayn sida caaryada cirbadda ee ugu dambeysa, ma awoodi doontid inaad ku isticmaasho sheyga ugu dambeeya.
Waa maxay Faa'iidooyinka caaryada noocyada ah?
Haddii aadan hubin sida ugu wanaagsan ee loo buuxiyo shuruudaha qeexidda, ama aadan hubin muuqaalka alaabta ugu dambeysa, waxaad si fudud u sameyn kartaa qiimeyn wax ku ool ah oo kharash-ku-ool ah iyada oo loo marayo hor-u-marinta ka hor intaadan u gudbin wax soo saarka caaryada.
Shirkado badan ayaan hubin sida loo horumariyo alaabada cusub marxaladaha hore. Xaaladdan oo kale, caaryada muditaanka hore ee soo-saarka ayaa kaa caawin karta inaad go'aamiso habka wax ku oolka ah iyo goorta aad u baahan tahay inaad dib ugu laabato guddiga sawirada .. Maaddaama aad isticmaaleyso alaab qiimo jaban iyo habab dhaqso badan, ma dareemi doontid cadaadis inaad la kulanto baahiyo.
Maaddaama mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha warshadaha, YF Mold wuxuu leeyahay khubaro la tacaali kara nooc kasta oo caaryo ah, oo ay ku jiraan noocyada hore. Waxaan kaa caawinaynaa inaad horumariso qiimeyn hufan oo qiimo leh ka hor intaanad goyn caaryada wax soo saarka ugu dambeeya. Tani waa sababta aan hogaamiye ugu nahay warshadaha sameynta caaryada. Haddii aad diyaar u tahay inaad ka shaqeyso qaab caag ah oo nooc ah, si xor ah u soo dir email ama taleefan noo soo dir mashruucaaga caadada ah.
Warshadda caaryada, Caaryada Custom, Wax taaj oo kale duritaanka Iyadoo bir biraha, Samaynta Qaab Muunad, Soosaarayaasha caaryada, Wax taaj oo kale galinta caaga ah,